၀ါသနာမပါတဲ့အလုပ် လုပ်ကိုင်ကြရတဲ့အခါ - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on January 27, 2016 at 11:38 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
လူ​တိုင်း​မှာ ​ ကိုယ်ဝါသနာပါရာအလုပ်၊ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာပညာရပ်တစ်ခုခုရှိ စမြဲပါ။ ​ငယ်​စဉ်​က​တည်း​က ​ဝါ​သ​နာ​နဲ့ ​ရည်​မှန်း​ချက်​ကို ​သိ​နေ​တဲ့​သူ ​ရှိ​သ​လို၊ ​တ​ချို့​လူ​ငယ်​တွေ​အနေနဲ့လည်း ​ကိုယ့် ဝါ​သ​နာ​နဲ့​ဆက်​စပ်​တဲ့ ​ဘ၀​ရည်​မှန်း​ချက်​က ဘာ​ဆို​တာ​ကို ​အ​ချိန်​အ​တော်ကြာကြာအ​ထိ ​မ​သိ​တဲ့ ​လူ​ငယ်​တွေ​လည်း ​ရှိ​တတ်​ပါ​တယ်။ ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ၊ ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်တာလို့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကမေးလိုက်ရင် တချို့လူငယ်တွေမှာ ရုတ်တရက်အဖြေမပေးနိုင်ကြပါဘူး။
​ဆ​ရာ​ကြီး​လူ​ထု​စိန်​ဝင်း​က ‘​လူ​ငယ်​မှန်​ရင် ​စိတ်​ကူး​ယဉ်​အိပ်​မက်​တွေ ​အ​မြဲ​မက်​နေ​ရ​မယ်။ ​အိမ်​မက်​မ​မက်​တတ်​ရင် ​လူ​ငယ်​မ​ဟုတ်​ဘူး’ ​လို့ ​ပြော​ခဲ့​ဖူး​ပါ​တယ်။ ​ငယ်​ရွယ်​စဉ်​က ​အိပ်​မက်​တွေ​က ​ကြီး​ပြင်း​လာ​တဲ့​အ​ခါ ​ဘ၀ ရည်​မှန်း​ချက်​တွေ ​ဖြစ်​လာ ​တတ်​လို့​ပါ​ပဲ။
​လူ​ငယ်​တွေ​တော်​တော်​များ​များ​က ​ကျောင်း​ပြီး​တော့ ​အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အ​လုပ်​ခွင်​ထဲ​ရောက်​လာ​ကြ​တယ်။ ​အလုပ်ခွင်မှာအဆင်ပြေတဲ့အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ပြီး ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်လျှောက်လှမ်းကြတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုခုမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး ​အ​ချိန်​ကြာ​လာ​တဲ့​အ​ခါ ​လက်​ရှိ​အ​လုပ်​ကိုငြီးငွေ့လာကြတယ်။ မပျော်မရွှင်ဖြစ်လာကြတယ်။ ၀ါသနာလည်းမပါ၊ စိတ်ဝင်စားမှုလည်းမရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုက ကြာလာတဲ့အခါမှာ လူတစ်ယောက်အတွက် ငြီးငွေ့စရာ၊ စိတ်ပျက်စရာဖြစ်လာတာကို အချိန်အတော်ကြာနောက်ကျမှသိသူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။
ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရုတ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီးကွန်ဖြူးရှပ်က “အလုပ်ရှာတဲ့အခါ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုရှာပါ၊ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုရှာပါ။ အဲဒီလိုဆိုရင် တစ်ရက်မှ အလုပ်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူး” လို့ဆိုထားပါတယ်။။ တကယ်တော့ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အလုပ်၊ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့ အလုပ်ဆိုတော့ အလုပ်လုပ်ရတယ်လို့မထင်တော့ဘူးလေ။ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုချစ်တာကြောင့် အလုပ်မှာလည်း ပင်ပန်းတယ်လို့မထင်တော့ဘူး။ ကိုယ်ကဒီအလုပ်ထဲမှာစိတ်ကိုနစ်မြုပ်ထားတာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေဆိုတာ ကိုယ့်အတွက်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ၊ ပျော်စရာတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
တစ်​ခါ​တ​လေ​လည်း ​မိ​သား​စု​အ​ခက်အ​ခဲ​ကြောင့်၊ ​ပတ်​ဝန်း​ကျင်​အ​ခြေ​အ​နေ​တွေ​ကြောင့် ​ဝါ​သ​နာ​ကို ​စွန့်​လွှတ်လိုက်​ရ​သူ​တွေ​လည်း ​ရှိ​မှာ​ပါ။ အဲဒီလိုလူငယ်တွေလည်း အများအပြားတွေ့ရပါတယ်။ လူငယ်လေးတစ်ယောက် ဆို သူဖြစ်ချင်တာက ရုပ်သံမီဒီယာတွေမှာအစီအစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်ချင်တာ။ ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်နဲ့ကျောင်းပြီးထားတော့ HR ပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နေတာကို တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးစမှာတော့ သူဖြစ်ချင်တာဘာမှန်းလည်းမသိ၊ ဘာကိုဝါသနာပါမှန်းလည်းမသိဘဲ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ရောက်လာပြီး ကျောင်းပြီးတော့မှ သူ့ရဲ့ဝါသနာကိုသိခွင့်ရလိုက်ပေမဲ့ နောက်ကျသွားပါတယ်။ လက်ရှိမှာ မိသားစုကို ထောက်ပံ့နေရတာဖြစ်တော့ ၀ါသနာပါတဲ့အလုပ်ကလစာပမာဏနည်းပါးတာကြောင့် သူ့ရဲ့ဝါသနာကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
​ငယ်စဉ်ကတည်းက ကိုယ်လုပ်​ချင်​တဲ့​အ​လုပ်​က ​ဘာ​ဆို​တာ​ကို ​သိ​နေ​ကြ​တဲ့ ​လူငယ်တွေအတွက်ကတော့ ဒီလိုအ​ခက်​အ​ခဲ​မျိုး ​မ​ကြုံ​တွေ့ရပါဘူး။ ​အ​စိုး​ရ​ဝန်​ထမ်း​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် ​ကု​မ္ပ​ဏီ​ဝန်​ထမ်း​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် ​ငယ်​ငယ်​က​တည်း​က ​တစ်နေ့နေ့မှာ ကျောင်းဆရာမဖြစ်ရမယ်၊ ဥပဒေပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်၊ HR မန်နေဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်၊ မားကက်တင်းမန်နေဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်၊ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ် စတဲ့ရည်​မှန်း​ချက်​ပန်းတိုင်တွေထားပြီး ကြိုးစားကြတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိပါတယ်။
​တ​ချို့​လူ​ငယ်​တွေ​ရဲ့ ​ဘ၀​မှာ ​ငယ်​စဉ်​က​တည်း Guideline ​ပေး​တဲ့ ​ကိုယ့်​ရဲ့​အ​ကြီး​အ​ကဲ၊ ​မိ​ဘ​ဆွေ​မျိုး​တွေ​ရှိ​နေ​တတ်​ပါ​တယ်။ ​ကိုယ်​တိုင်​က ​အ​လုပ်​တစ်​ခု​ကို ​ဝါ​သ​နာ​ပါ​တယ်၊ ​မ​ပါ​ဘူး ​မ​စဉ်း​စား​မိ​ဘဲ ​သူ​တို့ Guideline ​ချ​ပေး​တဲ့​အ​တိုင်း ​ရွေး​ချယ်တတ်​ပါ​တယ်။
​ဒါ​ကြောင့် ​ငယ်​စဉ်​က​တည်း​က ​သူ​တို့​ရဲ့ ​ပုံ​သွင်း တဲ့​အ​တိုင်း ​ဆ​ရာ​ဝန်​လုပ်​မယ်၊ ​အင်​ဂျင်​နီ​ယာ​လုပ်​မယ်၊ ​သ​င်္ဘော​သား​လုပ်​မယ်၊ ​စီး​ပွား​ရေး ​လုပ်​ငန်း​ရှင် ​တစ်​ယောက်​ဖြစ်​အောင်​လုပ်​မယ်၊ ​ဆ​ရာ​မ​လုပ်​မယ်စ​တဲ့ ​လူ​ကြီး​တွေ​ရဲ့ ​ပုံ​စံ​သွင်း​ထား​တဲ့ ​ဘောင်​အ​တွင်း​မှာ ​ရှိ​နေ​တဲ့ ​လူ​ငယ်​တွေ​လည်း ​ရှိ​ပါ​တယ်။ ​ဒါ​ပေ​မဲ့ ​ကိုယ့်​ရဲ့ ​ဝါ​သ​နာ​ကို ​သိ​လာ​တဲ့ ​အ​ချိန်​ရောက်​လာ​တဲ့ ​အ​ခါ​မှာ​တော့ ​လက်​ရှိ​အ​လုပ်​ကို ​ပျင်း​ရိ​ငြီး​ငွေ့​သွား​တတ်​ပါ​တယ်။ ​အဲ​ဒီ​အ​ခါ​မှာ ​ရှေ့​မ​တိုးသာ၊ နောက်​မ​ဆုတ်​သာ ​အ​ခြေ​အ​နေ​မျိုး​တွေ​နဲ့ ​ရင်​ဆိုင်​ရတတ်​ပါ​တယ်။
​ဝါ​သ​နာ​မ​ပါ​တဲ့ ​အ​လုပ်​မှာ​လုပ်​နေ​ကြ​တဲ့ ​ဝန်​ထမ်း​အ​များ​စု​အတွက် လုပ်ငန်းခွင်ပြဿနာက လုပ်​ငန်း​ခွင်​မှာ ​စိတ်မပျော်ရွှင်တာ၊ ​အ​လုပ်​ကို ​စိတ်​မ​ဝင်​စား​တာ၊ အလုပ်ကိုအောင်မြင်အောင်မလုပ်ကိုင်နိုင်တာစတာ​တွေ​ကြောင့် ​အ​ကြီး​အ​ကဲ​ရဲ့ ​ငြို​ငြင်​မှု​ကို​ခံရတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကို ၀ါသနာမပါဘူး၊ ပျော်​ရွှင်မှု​လည်း ​မ​ရ​ဘူး​ဆို​ရင်​တော့ ​ကိုယ့်​ရဲ့ ​ဝါ​သ​နာကို​အ​ခြေ​ခံ​တဲ့ ​ကိုယ့်ရဲ့ရည်​မှန်း​ချက်​ဘာ​လဲ​ဆို​တာ ​သေ​ချာ စဉ်း​စား​ဆုံး​ဖြတ်​ပြီး ​လက်​ရှိ​အ​လုပ်​ကို ​စွန့်​လွ​တ်ပြီး ​ခိုင်​မာ​သေ​ချာ​တဲ့ ​ကိုယ့်​ရဲ့​ရည်​မှန်း​ချက်​ကို ​ရွေး​ချယ်​ဖို့ ​လို​အပ်​ပါ​တယ်။ မပျော်ရွှင်တဲ့အလုပ်ကနေ ရုန်းမထွက်နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်း လက်ရှိအလုပ်မှာ ပျော်ရွှင်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်တာကသာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ် နေပါတော့တယ်။ ​ဒါ​မှ​သာ ​လုပ်​ငန်း​ခွင်​မှာ ​အောင်​မြင်​ပျော်​ရွ​ငှ်​တဲ့ ​ဝန်​ထမ်း​ကောင်း​တစ်​ဦး​အ​ဖြစ် ​ရပ်​တည်​နေ​နိုင်​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
လူ​တိုငျး​မှာ ​ ကိုယျဝါသနာပါရာအလုပျ၊ ကိုယျစိတျဝငျစားတဲ့အသကျမှေးဝမျးကြောငျးဆိုငျရာပညာရပျတဈခုခုရှိ စမွဲပါ။ ​ငယျ​စဉျ​က​တညျး​က ​ဝါ​သ​နာ​နဲ့ ​ရညျ​မှနျး​ခကျြ​ကို ​သိ​နေ​တဲ့​သူ ​ရှိ​သ​လို၊ ​တ​ခြို့​လူ​ငယျ​တှေ​အနနေဲ့လညျး ​ကိုယျ့ ဝါ​သ​နာ​နဲ့​ဆကျ​စပျ​တဲ့ ​ဘဝ​ရညျ​မှနျး​ခကျြ​က ဘာ​ဆို​တာ​ကို ​အ​ခြိနျ​အ​တျောကွာကွာအ​ထိ ​မ​သိ​တဲ့ ​လူ​ငယျ​တှေ​လညျး ​ရှိ​တတျ​ပါ​တယျ။ ကိုယျဘာဖွဈခငျြတာလဲ၊ ကိုယျဘာလုပျခငျြတာလို့ တဈစုံတဈယောကျကမေးလိုကျရငျ တခြို့လူငယျတှမှော ရုတျတရကျအဖွမေပေးနိုငျကွပါဘူး။
​ဆ​ရာ​ကွီး​လူ​ထု​စိနျ​ဝငျး​က ‘​လူ​ငယျ​မှနျ​ရငျ ​စိတျ​ကူး​ယဉျ​အိပျ​မကျ​တှေ ​အ​မွဲ​မကျ​နေ​ရ​မယျ။ ​အိမျ​မကျ​မ​မကျ​တတျ​ရငျ ​လူ​ငယျ​မ​ဟုတျ​ဘူး’ ​လို့ ​ပွော​ခဲ့​ဖူး​ပါ​တယျ။ ​ငယျ​ရှယျ​စဉျ​က ​အိပျ​မကျ​တှေ​က ​ကွီး​ပွငျး​လာ​တဲ့​အ​ခါ ​ဘဝ ရညျ​မှနျး​ခကျြ​တှေ ​ဖွဈ​လာ ​တတျ​လို့​ပါ​ပဲ။
​လူ​ငယျ​တှေ​တျော​တျော​မြား​မြား​က ​ကြောငျး​ပွီး​တော့ ​အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ အ​လုပျ​ခှငျ​ထဲ​ရောကျ​လာ​ကွ​တယျ။ ​အလုပျခှငျမှာအဆငျပွတေဲ့အလုပျတဈခုခုလုပျပွီး ကိုယျ့ဘဝကိုယျလြှောကျလှမျးကွတယျ။ အဲဒီလိုလုပျငနျးခှငျတဈခုခုမှာဝငျရောကျလုပျကိုငျပွီး ​အ​ခြိနျ​ကွာ​လာ​တဲ့​အ​ခါ ​လကျ​ရှိ​အ​လုပျ​ကိုငွီးငှလေ့ာကွတယျ။ မပြျောမရှငျဖွဈလာကွတယျ။ ၀ါသနာလညျးမပါ၊ စိတျဝငျစားမှုလညျးမရှိတဲ့အလုပျတဈခုက ကွာလာတဲ့အခါမှာ လူတဈယောကျအတှကျ ငွီးငှစေ့ရာ၊ စိတျပကျြစရာဖွဈလာတာကို အခြိနျအတျောကွာနောကျကမြှသိသူတှလေညျး ရှိကွပါတယျ။
ကိုယျနှဈသကျတဲ့အလုပျကိုလုပျကိုငျရတာနဲ့ပတျသကျပွီး တရုတျအတှေးအချေါပညာရှငျကွီးကှနျဖွူးရှပျက “အလုပျရှာတဲ့အခါ ကိုယျနှဈသကျတဲ့အလုပျကိုရှာပါ၊ ကိုယျဝါသနာပါတဲ့အလုပျကိုရှာပါ။ အဲဒီလိုဆိုရငျ တဈရကျမှ အလုပျလုပျစရာမလိုတော့ဘူး” လို့ဆိုထားပါတယျ။။ တကယျတော့ ကိုယျနှဈသကျတဲ့အလုပျ၊ ကိုယျဝါသနာပါတဲ့ အလုပျ၊ ကိုယျခဈြတဲ့ အလုပျဆိုတော့ အလုပျလုပျရတယျလို့မထငျတော့ဘူးလေ။ ကိုယျလုပျတဲ့အလုပျကိုခဈြတာကွောငျ့ အလုပျမှာလညျး ပငျပနျးတယျလို့မထငျတော့ဘူး။ ကိုယျကဒီအလုပျထဲမှာစိတျကိုနဈမွုပျထားတာကွောငျ့ စိတျဖိစီးမှုတှေ၊ စိနျချေါမှုတှဆေိုတာ ကိုယျ့အတှကျတော့ စိတျဝငျစားစရာတှေ၊ ပြျောစရာတှဖွေဈနတေတျပါတယျ။
တဈ​ခါ​တ​လေ​လညျး ​မိ​သား​စု​အ​ခကျအ​ခဲ​ကွောငျ့၊ ​ပတျ​ဝနျး​ကငျြ​အ​ခွေ​အ​နေ​တှေ​ကွောငျ့ ​ဝါ​သ​နာ​ကို ​စှနျ့​လှတျလိုကျ​ရ​သူ​တှေ​လညျး ​ရှိ​မှာ​ပါ။ အဲဒီလိုလူငယျတှလေညျး အမြားအပွားတှရေ့ပါတယျ။ လူငယျလေးတဈယောကျ ဆို သူဖွဈခငျြတာက ရုပျသံမီဒီယာတှမှောအစီအစဉျတငျဆကျသူဖွဈခငျြတာ။ ဒါပမေဲ့လကျတှမှေ့ာတော့ စီးပှားရေး တက်ကသိုလျနဲ့ကြောငျးပွီးထားတော့ HR ပိုငျးမှာအလုပျလုပျနတောကို တှခေဲ့ဖူးပါတယျ။ ဆယျတနျးအောငျပွီးစမှာတော့ သူဖွဈခငျြတာဘာမှနျးလညျးမသိ၊ ဘာကိုဝါသနာပါမှနျးလညျးမသိဘဲ စီးပှားရေးတက်ကသိုလျရောကျလာပွီး ကြောငျးပွီးတော့မှ သူ့ရဲ့ဝါသနာကိုသိခှငျ့ရလိုကျပမေဲ့ နောကျကသြှားပါတယျ။ လကျရှိမှာ မိသားစုကို ထောကျပံ့နရေတာဖွဈတော့ ၀ါသနာပါတဲ့အလုပျကလစာပမာဏနညျးပါးတာကွောငျ့ သူ့ရဲ့ဝါသနာကိုစှနျ့လှတျလိုကျတယျလို့ ပွောပါတယျ။
​ငယျစဉျကတညျးက ကိုယျလုပျ​ခငျြ​တဲ့​အ​လုပျ​က ​ဘာ​ဆို​တာ​ကို ​သိ​နေ​ကွ​တဲ့ ​လူငယျတှအေတှကျကတော့ ဒီလိုအ​ခကျ​အ​ခဲ​မြိုး ​မ​ကွုံ​တှရေ့ပါဘူး။ ​အ​စိုး​ရ​ဝနျ​ထမျး​ပဲ​ဖွဈ​ဖွဈ ​ကု​မ်ပ​ဏီ​ဝနျ​ထမျး​ပဲ​ဖွဈ​ဖွဈ ​ငယျ​ငယျ​က​တညျး​က ​တဈနနေ့မှေ့ာ ကြောငျးဆရာမဖွဈရမယျ၊ ဥပဒပေညာရှငျတဈယောကျဖွဈရမယျ၊ HR မနျနဂြောတဈယောကျဖွဈရမယျ၊ မားကကျတငျးမနျနဂြောတဈယောကျဖွဈရမယျ၊ ဆရာဝနျတဈယောကျဖွဈရမယျ စတဲ့ရညျ​မှနျး​ခကျြ​ပနျးတိုငျတှထေားပွီး ကွိုးစားကွတဲ့လူငယျတှလေညျးရှိပါတယျ။
​တ​ခြို့​လူ​ငယျ​တှေ​ရဲ့ ​ဘဝ​မှာ ​ငယျ​စဉျ​က​တညျး Guideline ​ပေး​တဲ့ ​ကိုယျ့​ရဲ့​အ​ကွီး​အ​ကဲ၊ ​မိ​ဘ​ဆှေ​မြိုး​တှေ​ရှိ​နေ​တတျ​ပါ​တယျ။ ​ကိုယျ​တိုငျ​က ​အ​လုပျ​တဈ​ခု​ကို ​ဝါ​သ​နာ​ပါ​တယျ၊ ​မ​ပါ​ဘူး ​မ​စဉျး​စား​မိ​ဘဲ ​သူ​တို့ Guideline ​ခြ​ပေး​တဲ့​အ​တိုငျး ​ရှေး​ခယျြတတျ​ပါ​တယျ။
​ဒါ​ကွောငျ့ ​ငယျ​စဉျ​က​တညျး​က ​သူ​တို့​ရဲ့ ​ပုံ​သှငျး တဲ့​အ​တိုငျး ​ဆ​ရာ​ဝနျ​လုပျ​မယျ၊ ​အငျ​ဂငျြ​နီ​ယာ​လုပျ​မယျ၊ ​သ​င်ျဘော​သား​လုပျ​မယျ၊ ​စီး​ပှား​ရေး ​လုပျ​ငနျး​ရှငျ ​တဈ​ယောကျ​ဖွဈ​အောငျ​လုပျ​မယျ၊ ​ဆ​ရာ​မ​လုပျ​မယျစ​တဲ့ ​လူ​ကွီး​တှေ​ရဲ့ ​ပုံ​စံ​သှငျး​ထား​တဲ့ ​ဘောငျ​အ​တှငျး​မှာ ​ရှိ​နေ​တဲ့ ​လူ​ငယျ​တှေ​လညျး ​ရှိ​ပါ​တယျ။ ​ဒါ​ပေ​မဲ့ ​ကိုယျ့​ရဲ့ ​ဝါ​သ​နာ​ကို ​သိ​လာ​တဲ့ ​အ​ခြိနျ​ရောကျ​လာ​တဲ့ ​အ​ခါ​မှာ​တော့ ​လကျ​ရှိ​အ​လုပျ​ကို ​ပငျြး​ရိ​ငွီး​ငှေ့​သှား​တတျ​ပါ​တယျ။ ​အဲ​ဒီ​အ​ခါ​မှာ ​ရှေ့​မ​တိုးသာ၊ နောကျ​မ​ဆုတျ​သာ ​အ​ခွေ​အ​နေ​မြိုး​တှေ​နဲ့ ​ရငျ​ဆိုငျ​ရတတျ​ပါ​တယျ။
​ဝါ​သ​နာ​မ​ပါ​တဲ့ ​အ​လုပျ​မှာ​လုပျ​နေ​ကွ​တဲ့ ​ဝနျ​ထမျး​အ​မြား​စု​အတှကျ လုပျငနျးခှငျပွဿနာက လုပျ​ငနျး​ခှငျ​မှာ ​စိတျမပြျောရှငျတာ၊ ​အ​လုပျ​ကို ​စိတျ​မ​ဝငျ​စား​တာ၊ အလုပျကိုအောငျမွငျအောငျမလုပျကိုငျနိုငျတာစတာ​တှေ​ကွောငျ့ ​အ​ကွီး​အ​ကဲ​ရဲ့ ​ငွို​ငွငျ​မှု​ကို​ခံရတတျပါတယျ။
ကိုယျလုပျတဲ့အလုပျကို ၀ါသနာမပါဘူး၊ ပြျော​ရှငျမှု​လညျး ​မ​ရ​ဘူး​ဆို​ရငျ​တော့ ​ကိုယျ့​ရဲ့ ​ဝါ​သ​နာကို​အ​ခွေ​ခံ​တဲ့ ​ကိုယျ့ရဲ့ရညျ​မှနျး​ခကျြ​ဘာ​လဲ​ဆို​တာ ​သေ​ခြာ စဉျး​စား​ဆုံး​ဖွတျ​ပွီး ​လကျ​ရှိ​အ​လုပျ​ကို ​စှနျ့​လှ​တျပွီး ​ခိုငျ​မာ​သေ​ခြာ​တဲ့ ​ကိုယျ့​ရဲ့​ရညျ​မှနျး​ခကျြ​ကို ​ရှေး​ခယျြ​ဖို့ ​လို​အပျ​ပါ​တယျ။ မပြျောရှငျတဲ့အလုပျကနေ ရုနျးမထှကျနိုငျတော့တဲ့ အခွအေနမှော ရှိနမေယျဆိုရငျလညျး လကျရှိအလုပျမှာ ပြျောရှငျအောငျကွိုးစားနထေိုငျတာကသာ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးတဈခုဖွဈ နပေါတော့တယျ။ ​ဒါ​မှ​သာ ​လုပျ​ငနျး​ခှငျ​မှာ ​အောငျ​မွငျ​ပြျော​ရှ​ငျှ​တဲ့ ​ဝနျ​ထမျး​ကောငျး​တဈ​ဦး​အ​ဖွဈ ​ရပျ​တညျ​နေ​နိုငျ​မှာ​ဖွဈ​ပါ​တယျ။
Permalink Reply by Aung Aung Myint Oo on January 27, 2016 at 13:04
Permalink Reply by Yee Yee Htun on January 27, 2016 at 13:35
ဘာကို ၀ါသနာပါမှန်း မသိသေးတဲ့လူငယ်တွေကို ကိုယ်ဘာကိုဝါသနာပါသလဲ သိရအောင်
ဘယ်လိုလုပ်ပေးသင့်လဲ ကိုယ်တိုင်ကရော ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သင့်လဲ
Permalink Reply by Kyawt K Khine on January 27, 2016 at 14:52
ဟုတ်ကဲ့ပါ ညီမရေ... အစ်မသိသလောက် အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ ပြောရရင် ကိုယ့်ဝါသနာဘာမှန်းမသိသေးသူ လူငယ်တွေအတွက် Career Test ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ ၀င်ရောက်ဖြေဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့အဖြေပေါ်မှာ ကိုယ့်ဝါသနာနဲ့အနီးစပ်ဆုံးကို တာဝန်ရှိသူတွေက ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေလည်း အခမဲ့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း MSHRM (Myanmar Society for Human Resource Management) က အခမဲ့စစ်ဆေးပေးပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Career ကိုစစ်ဆေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီလိုလေး ကြိုးစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
Permalink Reply by Avril Candy on January 27, 2016 at 15:43
Can you give me that link please ?
Permalink Reply by Yee Yee Htun on January 27, 2016 at 17:33
အခုလိုမေးတာလေးကို ပြောပါပေးလို့ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်
Permalink Reply by အောင်အောင် on January 27, 2016 at 14:50
ကျောင်းပြီးတဲ့ specialization major က B'sc Geology ပါ လက်ရှိ အလုပ်ခွင်ထဲကအလုပ်က Japanese Chef တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ၀ါသနာ ပါတဲ့ Major နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုချင်ပေမယ့် မပြူနိင်ခဲ့ဘူး။ ဒီစာလေး ဖတ်ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် ဖြေသိတ်နိင်ပါတယ်.
Permalink Reply by Kyawt K Khine on November 15, 2017 at 17:23
ဟုတ်ကဲ့ ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Permalink Reply by Ko Ko Aung on January 27, 2016 at 22:33
Permalink Reply by Yin Min Phyu on January 28, 2016 at 9:48
Permalink Reply by myomyowin on January 28, 2016 at 14:58
ကိုယ်ဝါသနာပါတာက ကိုယ့် အတွက်မဖြစ်နိုင်လို့ လက်လျော့လိုက်ရသူတွေများပါတယ် လက်တွေ့စားဝတ် နေရေးကပိုအရေးကြီးတတ်ကြတာထုံးစံပါ
နောက်ပြီးကျောထောက်နောက်ခံတို့ ငွေကြေးအင်အားတို့ လိုအပ်သလို အချိန်အတိုင်အတာလည်းလိုတယ်။ ပြောသလောက်မလွယ်ပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်ကပြောင်းလဲချင်ပြီဆိုရင်တော့ အသက်အရွယ်မရွေးအချိန်မရွေးစတင်လိုက်သင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်တော့ သုံးသပ်ပေါ့
Permalink Reply by htaylim on February 2, 2016 at 17:25